कोरोनाले गर्दा मान्छेको दिनहुँ नि:धन हुँदै गएपछि दुई हात जोड्दै रिमाले यसो भनिन्, हेर्नुहोस्
April 10, 2020 1641
गएको दुई हप्ता`देखि देश ‘लकडाउन’ मा छ । विश्वका २ सयभन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण`बाट बच्न सरकारले तेस्रो पट`कका थप ८ दिन बन्दा`बन्दी गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थात्, अब बैशाख ३ गतेसम्म घरभन्दा बाहिर निस्क`न पाइने छैन ।
यस वर्षको विदाई र नयाँ वर्षको स्वागत यस`पटक घरभित्रै`बाट गर्नुपर्नेछ ।‘लकडाउन’ को समय`मा अत्यावश्य`क काम`बाहेक घरभन्दा बाहिर निस्कन नपाइने हुँदा वर्षभरी छायांकन वा देश तथा विदेशमा हुने कार्यक्र`ममा व्यस्त हुने नेपाली कला`कारहरु गएको दुई हप्तादेखि परिवारसँग समय विता`इरहेका छन् ।
उनीहरुको दैनिकी कसरी वितिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन फेसबुक वा इन्स्टाग्राम निहाले पुग्छ । सबै परि`वारसँग समय विताउन पाए|कोमा खुसी छन् ।अभिनेत्री तथा उद्घो`षिका रीमा विश्व`कर्मा केही वर्ष`यता घरमा फुर्सदसँग एक`दिन पनि बस्न पाएकी थिइनन् । अन्य वर्षको तुलनामा यो वर्ष उनको दौड`धुप ज्यादा थियो ।
वर्षको सुरुवा`ततिर फिल्म ‘मिस्टर नेपाली’ को छायां`कनमा व्यस्त भइन् । त्यस`लगत्तै उनले आफ्नै टिम (केकी अधिकारी र विशाल भण्डारी) को कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ मा होस्टको जिम्मेवारी निभाइन् ।
यो रियालिटी शोको फिना`लेको मु`खमा देशमा कोरोनाको त्रास फैलिसकेको थियो । शो सकिएपछि उनी वर्षभ`रीको तनाव भुल्न माल्दिभ्स पुगिन् । त्यहाँ उनी स्वि`मिङ पुलमा रमा`एको तस्विरले केही दिन मिडियामा राम्रै स्थान पाए ।
कतिपयले भने उनको माल्दिभ्स यात्रा`लाई बेमौ`समको रमाइलो भन्दै आलोचना गरे । किनकि, त्यसबेला देशमा कोरोनाको सन्त्रास फैलिएको थियो ।सर`कार लामो दूरीका हवाई उडान बन्द गर्ने तया`रीमा रहेको सुइको पाएपछि राता`रात नेपाल ओर्लि`एकी रीमा त्यसयता भने घरभित्रै कैद छिन् ।
‘लकडाउन’ को समयमा उनले फिल्म, सिरिज र पुस्तक पढेर दिन विताइरहेकी छन् । उनले सा`माजिक सञ्जालको माध्यमबा`ट कोरोना सम्बन्धि सचेतना पनि फैलाइरहेकी छन् । यो सम`यमा सामाजिक दूरी कायम गर्न उनको अपिल छ ।`
यसबीच, अभिनेत्री रीमाले बुध`वार फेसबु`कमा दुई हात जो|डेको आफ्नो एक तस्विर सा`झेदार गर्दै कोरो|नाको यो महा`मारी चाँडै समाप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । उनले अब दुनि|याँमा पैसा प्र|मुख शक्ति नरहेको पनि उल्लेख गरेकी छन् । उनी लेख्छिन्, ‘दुनियाँ शान्त छ ।
हावा सफा छ । हामी स्वच्छता र स्वास्थ्य`प्रति जाग`रूक छौं । व्यस्त तालिका विश्रा`ममा बदलि`एको छ ।’ उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘फास्ट फूड`लाई घरमा पाकेको खाने`कुराले प्रतिस्था`पन गरेको छ । सबै जना एकअर्कासँग कुरा गर्दै र सँगै भोजन गर्दैछन् ।
पैसा अब संसा`रमा प्रमुख शक्ति जस्तो देखिँदैन ।’ यो समयमा सबैले सबैका लागि प्रार्थना गरिर`हेको उनको भनाई छ । अहिले एक`अर्कासँग कुरा गर्ने र मुस्कु`राउने समय रहेको बता`उँदै उनले सुरक्षित र सका`रात्मक रहन पनि अपिल गरेकी छन् ।`
Prevआजको विदेशी मुद्राको भाउ यस्तो छ, हेर्नुहोस् कुन-कुन विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो
Nextअमेरिकामा एक नेपाली रु दै कराउदै मलाई बचाउनुस् भन्दै आए (भिडियो हेर्नुस)
१२ सय तलबमा दुबई पुगेकी युवतीको एक वर्ष भित्रै ५५ सय दिराम पुग्यो तलब ! कारण यस्तो रहेछ…
चर्चित गायक प्रमोद खरेलको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी? हेर्नुहोस्